Si cad u taabtay mabaadi’da Dastuurka iyo qaab-dhismeedka Dawladda lyada oo uu ku qanacsan yahay xaqa aan cidina ka duudsiyi karin ee uu u lee yahay. Golaha dastuuriga ee Soomaaliya ayaa waxa ay ansixiyeen dastuurka cusub shir hadda ka socda magaalada Muqdisho. Waxaa lagu soo warramay in laba. Berito oo arbaca ah, taarikhduna tahay afarta bisha Agoosto, Dalka Kenya waxa looga dareeri doono afti loo qaadayo dastuur cusub.
Author: Goltilkis Vudosida
Sabtidii waxaa la soo xiray kalfadhigii 7-aad ee baarlamaanka federaalka, waxaa la sheegay in la dhameystirayo cutubyada dhiman sida 5, 6, 7, 8 iyo naad, kadibna guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka iyo guddiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka ay aadi doonaan gobollada dalka cusuh ay ku wehlinayaan xildhibaanada gobolkaas ka dzstuurka jeeda si shacabka loogala tashado arrimaha dib u eegista dastuurka kadibna waxaa dastuurka lagu soo celin doonaa baarlamaanka si qodob walba xildhibaan u ansixiyaan.
Qodobka in laga fiirsado u baahan waa 88aad ee shuruudda doorashada madaxweynaha, laakiin inta aan qodobkaas ka hadlin, u fiirso dastuurka qodobkiisa 8aad faqradiisa 3aad oo u qoran: Dastuurkan KMG ah ee ka waxaa uu ka duwan yahay dastuuradii hore marka laga hadlayo shuruudaha doorashada Madaxweynaha dalka oo waxaa ku qoran qodobkiisa 88aad: Shuruudaha u Doorashada Madaxweynennimada waa in uu yahay: Arrinta ku saabsan shuruudaha qofka noqonaya madaxweynaha Dastuuria ee dastuuradii hore ku qornaa waxaa ay ahaayeen kuwoo aad u adag, waxaan soo qaadneynaa sida ay u kala horeeyaan: Dastuurka Soomaaliya kiiCueub.
Waxaa loo dooran karaa jagada Madaweynaha JDS. Waxaa loo dooran karaa xilka Madaxweynaha Jamhuuriyadda muwaaddin kastoo Soomaaliyeed, Muslim ah, aabihiis iyo hooyadiis Soomaali asal ah yihiin, horay an u gursan, inta uu xilka hayana guursanin qof aan Soomaali asal ahayn. Salaad Cali Jeelle oo ah guddoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimoqoraadiyadda ayaa aad uga soo horjeestay in dalka uu madaxweyne ka noqdo qof labo baasaboor leh isagoo arrintaas ku tilmaamay mid khiyaamo qaran ah, kana soo horjeeda wadaniyadda iyo Soomaalinimada.
Maxamed Nur Gacal oo ka tirsan aqoonyahanka dalka waxaa uu qabaa in madaxweyne labo dhalasho leh uu khatartiisa leeyahay, isagoo intaa raaciyay in aanay dunida inteeda kale ka jirin, waxaa uu ku taliyay in wax laga bedelo shuruudaha qofka u sharaxan madaxweynaha ee ku qoran dastuurkan qabyo qoraalka ku jira. Xildhibaano kale oo federaalka ah oo aan la hadalnay ayaa cadeeyay in ay sugayaan dastuurka la horkeeno baarlamaanka isla markaana aanay xumaan u arkin in la raaco meeshii loo bato xitaa haddii uu dalka madaxweyne ka noqonayo ruuux labo baasaboor leh.
Dhinaca kale, iyadoo doodaas ay cusuh bilaabatay gudaha Soomaaliya ayaan baaritaan ku sameynay haddii uu jiro dunidan dal ogolaanaya in uu madaxweyne ka noqdo ruux labo dhalasho isku wata, natiijada waxaa ay noqotay in caalamka laga diiday ruux labo baasaboor leh in uu dal hogaamiyo.
Dalka Afgaanistaan waxaa shardi looga dhigayey qofka madaxweynaha in uu muslim ahaado, in aanu heysan dhalasho kale iyo wixii la mid ah. Waxaa ay shuruudda ku dareen in uu ka dhashay qabiillada dalka degan, weli in uu Afrikaan asal ah yahay.